RASMI: Barcelona Oo Warbixin Rasmi Ah Kasoo Saartay Xaalada Dhaawaca Jordi Alba & Haddii Uu Maqnaan Doono Kulamada El-Classico Iyo Juventus - Gool24.Net
RASMI: Barcelona Oo Warbixin Rasmi Ah Kasoo Saartay Xaalada Dhaawaca Jordi Alba & Haddii Uu Maqnaan Doono Kulamada El-Classico Iyo Juventus
Kooxda Barcelona ayaa warbixin caafimaad oo rasmi ah kasoo saartay xaalada dhaawac ee daafaca kooxdeeda ee Jordi Alba oo sabab dhaawac uga baxay kulankii ay xalay bar-bardhaca kula galeen kooxda Sevilla oo Camp Nou kusoo booqatay.
Kulanka kaddib Barcelona ayaa si rasmi ah u shaacisay in Jordi uu dhaawac ka gaadhay muruqa balse aan wax faah-faahin ah ka bixin mudada uu garoomada ka maqnaan doono.
Barcelona ayaa intaas ku dartay in baadhitaano dheeraad ah maanta oo Isniin ah lagu samayn doono Alba si loo ogaado heerka dhabta ah ee uu gaadhsiisan yahay dhaawaca ciyaaryahanku.
Kooxda uu hoggaaminayo tababare Ronald Koeman ayaa hadda haysata mudo laba toddobaad ah oo lagu maqnaan doono kulamada qaramada ee caalamiga ah, sidoo kale Alba ayaa haysta wakhti fiican oo uu kusoo kabto.
Warbixinta caafimaad ee ay hadda soo saartay Barcelona ayay ku sheegtay in dhaawaca Alba uu yahay mid dhaawac muruqa ah oo ka gaadhay muruqa lugtiisa midig isla markaana soo kabashadiisu ay ku xidhnaan doono soo laabashadiisa.
Sida ay sheegayaan warar kale, Alba ayaa maqnaan kara mudo laba ilaa saddex toddobaad ah balse muhiimada koowaad ayaa ah inuu taam buuxa u noqdo labada kulan ee adag ee Real Madrid iyo Juventus oo La Liga iyo Champions League kala ihi.
Si kastaba ha ahaatee, Barcelona ayay kulamo adagi sugayaan isla marka ay soo laabato iyagoo ugu horreynba booqan doona kooxda Getafe kahor inta aysan Camp Nou ku qaabilin kooxda ay xifaaltamaan ee Real Madrid kulanka xasaasiga ah ee El-Classico.